ဖြစ်ရပ်မှန် Archives - MM Live News
June 2, 2019 MM Live News
သီပေါအထွက်မှာ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရတဲ့ ကားသမားတစ်ဦး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မိခင်နဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖုန်းခေါ်ဆို Zawgyi 1.6.2019 မှာသီပေါမှ ကိုဖက်တီး (ခ) ကိုဇာနည်အောင် ဆုံးတာ တလပြည့်ပါပီး တလပြည့်အိမ်ရောက်တုန်း သေဆုံးသူအစ်ကိုကြီး ရဲ့ Lockကျနေတဲ့ဖုန်းကို တတ်သလောက် Lockဖြည့်ပီးနောက်သူ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရပီးနောက် မိဘလုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားလိမ္မာပီပီ မိခင်ကို ဖုန်းခေါ်ခဲ့တဲ့ အသံဖိုင် recording ဝမ်းနည်းစွာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ::အမေ အမေ သားကို သေနတ်နဲ့ပစ်သွားပီး သေနတ်ပစ်ခံရချိန်မှာ လူမှုကူညီမှုအသင်းကို ပစ်ခံရသူ ကိုယ်တိုင် ဆက် အကူညီတောင်းခံရတာကို တွေရမှာပါ😑😑😑 Credit-Thwein Htoo Aung Unicode 1.6.2019 မှာသီပေါမှ ကိုဖကျတီး (ခ) ကိုဇာနညျအောငျ ဆုံးတာ တလပွညျ့ပါပီး တလပွညျ့အိမျရောကျတုနျး သဆေုံးသူအဈကိုကွီး ရဲ့ […]
ဖန်ဂရမ်ရာဇီရေခဲတောင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး အသက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မစိမ့်ထက် အလောင်းကို ပူတာအိုမှာ မီးသဂြိုဟ်
သတင်း မစိမ့်ထက် အလောင်းကို ပူတာအိုမှာ မီးသဂြိုဟ် ဓာတ်ပုံ – ချစ်လှိုင် ဖန်ဂရမ်ရာဇီရေခဲတောင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး အသက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မစိမ့်ထက် ရုပ်ကလပ်ကို မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ပူတာအိုမြို့ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက် သချိုင်းမှာ မိသားစုဝင်များ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ခမ်းတီလုန်လူငယ် ပရဟိတအသင်းနဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ တောင်တက် အဖွဲ့ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များမှ မီးသဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။ အရိုးပြာတွေကို ရန်ကုန်အထိ သယ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ လိုက်ပါလာတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ မစိမ့်ထက်ဟာ အဖွဲ့ဝင် ၂၁ ဦးပါတဲ့ “The Summiter” တောင်တက်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဧပြီ ၃ရက်နေ့ကစပြီး တောင်တက်ခဲ့ပြီး ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရေခဲတောင်ပေါ်က ခြေချော်ကျပြီး အသက်သေဆုံးသွားခြင်း […]
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ရေခဲတောင်ခရီးမှာ မစိမ့်ထက်ကို သွားရောက်ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်း (၈)ဦး
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ရေခဲတောင်ခရီးမှာ မစိမ့်ထက်ကို သွားရောက်ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်း (၈)ဦး ၂၀၁၉ မေ လ ၂၅ ရက်နေ့က ဖန်ဂရန်ရာဇီရေခဲတောင်၌ ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ပူတာအိုမြို့သို့အရောက် ပြန်လည်သယ်ဆောင်ပေးလာကြတဲ့ ပူတာအို/ကချင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ရဝမ်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြတဲ့ (၈) ယောက်အဖွဲ့အား ကာယကံရှင်မိသားစုကိုယ်စား၊ ညီမငယ်စိမ့်ထက်ကို ဝိုင်းဝန်းကိုယ်ချင်းစာနာ ထောက်ထားပေးကြတဲ့ လူထုကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ၎င်းအဖွဲ့ဝင် (၈) ယောက်တို့မှာ ဦးလန်ဝမ်ထိန် ပေလဂ ဂျုံရှင်း ဆင်ချန်းဇိန် ဦးမလောင်ဆားရ် ဦးဖရန်ကန်ဆင် ဖရန်ကန်ခင်ဆားရ် ဆန်ဒေါင်းဖုန်ဆားရ် ဖုန်မောင်ဂျုံ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ မိသားစု၏ စီစဉ်မှုနှင့်အတူ၊ ဦးကျင်ဦးနှင့်အဖွဲ့မှ အကြံပေး/ညွန်ကြားပေးခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခရီးစဉ်ကို ဒေသခံ (၈) ယောက်ဖြင့် ထပ်မံဖွဲ့စည်း၍ မေလ […]
နှလုံးလှ တက္ကစီယာဉ်မောင်း တဦး (ဒီလိုလူမျိုး အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်)
နှလုံးလှ တက္ကစီယာဉ်မောင်း တဦး (ဒီလိုလူမျိုး အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်) ကားလာငှါးတယ်​..ပါရမီ​ဆေးရုံက​နေ ​အ​ဝေး​ပြေးဂိတ်​သွားချင်​လို့တဲ့…သရက်​မြို့နယ်​က ရွာ​လေးတစ်​ရွာကပါ…​အောင်​မင်္ဂလာကားဂိတ်​ ဘယ်​​လောက်​​ဝေးမှန်း ဘယ်​​လောက်​​ပေးရမယ်​မှန်း သူတို့မသိရှာကြဘူး ​တောင်းသ​လောက်ကို မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ထဲက ထုတ်​​ပေးမယ့်​သ​ဘော ​ပြောလာတယ်​…. သူတို့ရဲ့ သမီး​လေးက​မွေးရာပါ နှလုံးမှာ အ​ပေါက်​ပါလာလို့ ရန်ကုန်က ​​က​လေးဆရာဝန်​ကြီးကို လာပြတာ တဲ့..ဆရာဝန်​ကြီးက​ပြောသတဲ့ဒီအရွယ်​က ခွဲစိတ်​လို့ရ​နေပြီ ၂၅ သိန်း​လောက်​ကုန်​မယ်​တဲ့..မိဘ​တွေခမျာ ပိုက်​ဆံမတတ်​နိုင်​​တော့ ရွာပြန်​ပြီ အမျိုး​တွေနဲ့ တိုင်​ပင်​ပါရ​စေဦး ဆိုပြီး ပြန်​လာတာပါ..တဲ့ဗျာ.. က​လေးကြည့်​လိုက်​ပြန်​​တော့ ဖြူဖြူ ​ဖွေး​ဖွေး​လေး ဗျာ နို့စို့​နေတာ​တောင်​ ​ပါးစပ်​က​လေး ဟပြီး မော​နေရှာတာ..ကျွန်​​တော်​မျက်​ရည်​လည်​​အောင်​ သနားသွားမိတယ်​…. သံသရာမဆိုထားဘိ ခဏ​လေး​တွေ့ရတဲ့ ဘဝခရီးထဲ ဒီလူသား​လေးကို ငါ​တော့ ကရုဏာ​ပေးမယ်​ ..ဟဲ့လို့ တခါထဲ ဆုံးဖြတ်​ထားလိုက်​တယ်​…ကားဂိတ်​​ရောက်​​တော့ သူ့အ​ဖေက ကားခကို အတင်းထုတ်​​ပေးရှာပါတယ်​ မယူပါဘူးဗျာ […]
အမြန်လမ်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့် ဖုန်းလုသွားသည့် အမှုပေါ်ပြီး … ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ(၂၉)ရက်နေ့နံနက်(၀၆၃၀) နာရီချိန်တွင်. အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဇီးပင်သာစခန်း နယ်မြေ. မိုင်တိုင်. (၁၅၄/၀)ရွာသစ် ရဲကင်းမှရဲတပ်သား အောင်စိုးဝေ သည် မိုင်တိုင် (၁၅၂/၃)အနီးတွင်. ဒါး ဒဏ်ရာ(ပြတ်ရှ) ဖြင့် သေဆုံးလျက်တွေ့ ရှိပြီး. ၄င်း ပိုင်ဆိုင်သည့်. ဆိုင်ကယ်နှင့် တယ်လီဖုန်း ပျောက်ဆုံး ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည် ဖြစ်စဉ် သိလျင် သိခြင်း. အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယတပ်ဖွဲ့ မှူး ဦးစီး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များမှ တရားခံ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိရေး နယ်မြေခံ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ. ဒေသခံ […]
ကားတံခါးခေါက်ပြီး လာပြောရင် တုတ်မှာဆိုပြီး ကြုံးဝါးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာ
May 28, 2019 MM Live News
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးနားကို ကားမရပ်ခင်ကတည်းက ကားတံခါးခေါက်ပြီး လာပြောရင် တုတ်မှာဆိုပြီး ကြုံးဝါးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာ ရွှေပြည်သာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ အချင်းများခဲ့တဲ့ ကားပိုင်းရှင် ဆရာဝန်မ Mya Wut Yee အကောင့်ပိုင်ရှင် ရဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ အချင်းမပွားမှီ အချိန်လို့ယူဆရတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆရာဝန်မ ဆိုသူ Mya Wut Yee အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးအနီးသို့ မရောက်မီကတည်းက ရန်တွေ့ရန် ကြိုတင်စိတ်ကူးထားသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးအနီးသို့ ကားမရပ်ရဘူးဆိုတာကိုလည်းသိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ရပ်ခဲ့မိဖူးတာကြောင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကားတံခါးကို ခေါက်ပြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးအနီးကားမရပ်ရကြောင်းကို ကားတံကားမှန်ကို ခေါက်ကာ အသိပေးပြောထားခဲ့ကြောင်း ထိုအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ပြောဆိုနေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီး ဆရာဝန်မဆိုသူမှ မီသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် လူတစ်ယောက်ယောက် […]
ခေတ်သစ်လိမ်နည်းတခု (ကားနဲ့ အဝတ်အစားသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်တွေ ဝတ်ပြီး လိမ်တာပါ)
​ပြောပြချင်​​နေတာကြာပြီ..အလုပ်​မအားတာရယ်​၊ သိသိကြီးနဲ့ခံလိုက်​ရသလို..၊မခံချိမခံသာဖြစ်​​နေလို့။ စာမ​ရေးဖြစ်​ခဲ့။ ဒါ​ပေမယ့်​ ပြန်​​တွေးကြည့်​​တော့လည်း​ဖြေသာ​နေပြီ မို့..ဒီစာကိုဖတ်​ပြီးတဲ့သူမှန်​သမျှ၊၊ ကျွန်​မတို့်​ကို မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့၊ အထင်​မ​သေးပါနဲ့၊ကျွန်​မက..ရုတ်​တရက်​သတိလက်​လွတ်​သွား ရင်​​တောင်​အမျိုးသားက..​စေ့စပ်​​သေချာတဲ့သူတ​ယောက်​ပါ။ နှစ်​​ယောက်​စလုံးလက်​​တွေ့ကျကျအလိမ်​ခံထိ​အောင်​ပညာ​ပေး သွားတဲ့လူလိမ်​​ကျေးဇူးရှင်​၂​ယောက်​ကို​ကျေးဇူးတင်​တယ်​။ သူတို​ဟာ..အုပ်​စုလိုက်​..ပညာသားပါပါရန်​ကုန်​မြို့နယ်​ ​တော်​​တော်​များများရဲ့ရပ်​ကွက်​​တွေထဲမှာလည်းလိမ်​ခဲ့တာများ​နေ ပြီဆိုတာ..စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​groupထဲမှာ..postတင်​ လိုက်​​တော့သိလိုက်​ရပြီ​နောက်​ထက်​လည်းထပ်​လိမ်​​နေဦးမှာပဲ။ ကျွန်​မတို့ကိုပညာ​ပေးသွားတာက​တော့… proboxတစီးနဲ့အမျိုးသားလူရည်​သန့်​.၂​ယောက်​ .စမတ်​ကျကျပုံစံ၊အကျီင်္ရှပ်​ဖြူ၊​ဘောာင်းဘီရှည်​အနက်​ဝတ်​ထားတယ်​။ ကုမ္ပဏီ..တခုရဲ့အဆင့်​မြင့်​ဝန်​ထမ်းပုံစံလိုလို.​ဈေးဆိုင်​နဲ့.. ​ပေ၂၀​လောက်​​ဝေးတဲ့..လမ်း​ပေါ်မှာကားရပ်​ပြီး ဆိုင်​ထဲဝင်​လာတယ်​။ သူတို့ကုမ္ပဏီက​နေဖြန့်​တဲ့ပစ္စည်း​တွေအ​ရောင်းမြှင့်​တင်​ပြီး ကိုယ်​စားလှယ်​ဆိုင်​ထားဖို့​ပြောတယ်​။သူတို့ပစ္စည်း​တွေအတွက်​ ​ကောင်​တာသီးသန့်​​နေရာ​ပေးရင်​..လစာရမယ်​။ ပစ္စည်းတင်​ထားမယ်​။ သူတို့လာရှင်းတဲ့အခါ​ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းဖို့ပဲ ရှင်း​ပေးရမယ်​ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်းရှင်းပြတယ်​။ ကိုယ်​​တွေကလည်းလစာရတာ၊မရတာထက်​၊​ ဈေးနှုန်းသက်​သက်​ သာသာနဲ့ အနားမှာ ​ရောင်းချင်​တဲ့စိတ်​ပဲရှိတာ။ အရင်​တုန်းကဆို ပစ္စည်းလာချတဲ့ကား​တွေ ရှိတာ​တောင်​၊ မယူဘူး၊အလုပ်​ရှုပ်​လို့၊ သူတို့ပစ္စည်းလာချတဲ့အချိန်​ ကိုယ်​​တွေ မအား ဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့ မယူဘူးရယ်​။ ခုလည်း သူတို့နဲ့ အကြာကြီး​သေချာ စကား​ပြောကြည့်​တယ်​။ သူတို့်​ကိုသိပ်​မယုံဘူး။ ကဲ..ပစ္စည်းချချင်​တယ်​ ဆိုရင်​လည်း ချခဲ့​နောက်​လာရှင်း ဆို​တော့.. မန်​ဘာဝင်​ ဖြစ်​​အောင်​..ခု၅သိန်းဖိုး​ငွေ​ချေပြီးဝယ်​ပါ။ ​နောက်​၂ရက်​ကြာရင်​..​ကောင်​တာ​ပစ္စည်း​တွေလာချရင်းနဲ့.. […]
စိတ်တွေ မကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ သားအဖသုံးဦး
တ်တွေ မကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ။ နောင်ဘဝမှာအခုလိုအဖြစ်စ်ိုးမျိုးနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေ။ ။ ချင်းတွင်းတံတား​အောက်​ ​​ရေယာဉ်​နစ်​မြုပ်​မှု့တွင်မိသားစုတစ်​စု ပါဝင်​ခဲ့ပြီး မိခင်​သာ အသက်​ရှင်​ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့မနက် ၉နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖောင်ဆွဲမော်တော် နစ်မြုပ်မှု့တွင် ​မော်​​တော်​၏ ကိုယ်​စားလှယ်​ မိသားစုတစ်​စုပါဝင်​ခဲ့ပြီး မိခင်​ဖြစ်​သူသာလွတ်​​မြောက်​ခဲ့သည်​။ မိသားစု ဝင် ၄ဦး ပါဝင်လာရာ ၈နှစ်အရွယ်နှင့်​၈လအရွယ် သားယောကျာ်းလေးနှစ်​ဦးနှင့်​ ဖခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာ လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူ ကိုဇာနည်-အသက်(၃၆)နှစ် ထူးသန့်ဇာနည်-အသက်(၈) နှစ် ဇွဲသန့်ဇာနည် -အသက်(၈) လ တို့အား မုံရွာဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံမှ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ပေါင်းဝကျေးရွာ ၎င်းတို့၏နေအိမ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့။ #သုခဟိတနာရေးကူညီမှု့နှင့်သွေးလှူရှင်သင်း – ၀၇၁ ၂၄၉၉၄ ယနေ့မနက် ၉နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖောင်ဆွဲမော်တော် နစ်မြှုပ်မှုတွင် ​မော်​​တော်​၏ ကိုယ်​စားလှယ်​ မိသားစုတစ်​စုပါဝင်​ခဲ့ပြီးမိခင်​ဖြစ်​သူသာလွတ်​​မြောက်​ခဲ့သည်​။ မိသားစု […]